Mac အတွက်အကောင်းဆုံးဘရောင်ဇာ (၁၃) ခု၊ အကောင်းဆုံးဘရောင်ဇာကဘာလဲ။ | ငါက Mac ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | Mac OS X ကို, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
သင်ရှာနေပါတယ် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser လား လောလောဆယ်စျေးကွက်တွင် OS X နှင့်လိုက်ဖက်သော browser အမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများအများစုသည် Safari ကိုမူလအတိုင်းသာတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် system တစ်ခုလုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပေါင်းစည်းမှုကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါတောင်မှ Windows အသုံးပြုသူများသည် Internet Explorer ကိုပိုးမွှားများကဲ့သို့ပင် Safari ကိုရွံမုန်းသောသုံးစွဲသူအများစုရှိနေသေးသဖြင့်သင့်အားစာရင်းတစ်ခုပေးမည်။ Mac အတွက်ထိပ်ဆုံး browser (၁၀) ခု.
ဈေးကွက်တွင် Apple ၏ desktop operating system နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော browser အမြောက်အမြားကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အရေအတွက်သည်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်၊ ၎င်းကို Windows နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော browser အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။ သို့သော်သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser များ၊ Safari, Firefox, Chrome, Opera ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံး browser များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်သင်ပြပါလိမ့်မည်။
ငါ Mac နှင့် OS X အတွက်အကောင်းဆုံး Browser စာရင်းကိုကျွန်ုပ်၏အကြိုက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကြိုးစားနေသည် အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြပါ သောသူတို့သည်အောက်ပါနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုခွဲခြားဖို့ငါ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးနောက် Mac အတွက်အကောင်းဆုံးဘရောင်ဇာ (သို့) သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည်။
1 များစွာသောလူများအတွက် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser Safari
2 Firefox ကို
3 Chrome ကို
7 မီးရှူးတိုင် Browser ကို
9 Yandex Browser ကို
10 Sleipnir ဘရောက်ဇာ
12 Rockmelt, လူမှုမီဒီယာ browser ကို
များစွာသောလူများအတွက် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser Safari
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်ဟာ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်လျှင် Safari သည် Mac အတွက်သင်သုံးနိုင်သောအကောင်းဆုံး browser ဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြားထပ်တူပြုခြင်း ဒီတူညီတဲ့အကောင့်ကကျွန်တော်တို့ကို Bookmarks များနှင့်မည်သည့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch မှကျွန်ုပ်တို့၏ MAC ၏သမိုင်းကိုပင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် iCloud Keychain မှတဆင့်သော့များနှင့်သုံးစွဲသူအမည်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကိုင်တွယ်ရန်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
သင်၏ Mac ဆက်သွယ်မှုပြနာရှိပါသလား။
Safari သည်သီအိုရီအရဆိုသောအခြားဘရောင်ဇာတစ်ခုကိုမစဉ်းစားရန်အလုံအလောက်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Safari ကို OS X ကဲ့သို့သော developer များကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ သို့မှသာ system တစ်ခုလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်အမျိုးမျိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည် သူတို့ကရိုက်နှက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို browser ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ extension ထပ်ထည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Chrome ပိုကောင်းတဲ့ဆင်ခြေဟာလုံးဝစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။
Firefox ကြုံတွေ့နေရသောနှေးကွေးသောတိုးတက်မှုများရှိလင့်ကစား Mac အတွက်ဤ browser သည်ယခုထိရှိနေဆဲဖြစ်သည် Safari ပြီးနောက် OS X အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဇာတိ install လုပ်သော။ Firefox သည်အမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အသုံးပြုသူ၏ browsing ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအတွင်း၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MAC သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ Firefox မှပေးထားသောနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာလွတ်လပ်မှုနှင့် browse လုပ်စဉ်ကပေးထားသော privacy သည်အထူးသဖြင့် Amazon ကဲ့သို့သောပုံမှန်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်တွေ့ရှိခဲ့သောစျေးနှုန်းများကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များကိုခြေရာခံသည်။
Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser များထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသည့်အင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည် extension ကိုမဆိုအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ။ တကယ်တော့၊ များစွာသောသူတို့ဟာ Chrome ကဲ့သို့သောအခြားပလက်ဖောင်းများတွင်သူ့ရဲ့ counterpart ကိုမရှာဘဲ Firefox အတွက်သာရရှိနိုင်ပါတယ်။ Firefox နှင့် devices များအကြားထပ်တူပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Firefox တပ်ဆင်ထားသည့် Device အားလုံးတွင် Bookmarks နှင့် Passwords အားလုံးရှိနိုင်ပါတယ်။ Windows, Android, Linux တို့ပါ။
Firefox ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။
မကြာသေးမီကအထိ browser သည် Mac laptops များ၏နက်ရှိုင်းသောသိုးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး၎င်းနှင့်အမြဲဆက်စပ်နေသည့် application များ၏ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံး (Hangouts, Google Drive ... ) သည်ဤ browser ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MacBook ဘက်ထရီအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ သင်မည်သည့်စာမျက်နှာသို့ရောက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းတွင် Flash ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook ၏ပရိသတ်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအမြဲတမ်းအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် Mac သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းသည်။ ကျနော်တို့ဘက်ထရီကုန်သွားတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းသိကတည်းကဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, OS X အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Chrome ဗားရှင်းကဒီပြourနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီး MacBook ပရိသတ်တွေရဲ့အမြန်နှုန်းကလည်းဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအပြင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုလည်းနည်းပါးသည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်နောက်ကျလွန်း။ Chrome သည်သူတို့၏လက်ပ်တော့ပ်များကိုပြန်လည်မနင်းပါ။ ။ Firefox ကဲ့သို့ Chrome သည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်စကားဝှက်များအကြား bookmarks များထပ်တူပြုခြင်းကိုပေးထားသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုသယ်ဆောင်ရန်စကားဝှက်များကိုရေးစရာမလိုဘဲအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသက်သာစေသည်။ ထို့အပြင် application နှင့် extension စတိုးကကျွန်တော်တို့ကို add-ons များစွာကိုပေးထားပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ browser အတွက်မူ Mac ၏အရင်းအမြစ်အများစုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါတစ်ခါတစ်ရံတန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် add-ons များရှိသည်။
အခမဲ့ Chrome ကို download လုပ်ပါ။
စနိုးဒင်ရဲ့ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုတွေနဲ့မြောက်အမေရိကသာမကအစိုးရအားလုံးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလူသိရှင်ကြားမကြေငြာခင်အထိအသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ Thor ဘရောက်ဇာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ သင်၏ရှာဖွေမှု၏သဲလွန်စကိုမချန်မထားရန်နှင့်သင်၏တည်နေရာ (IP) ပေါ်မူတည်ပြီးရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရန်.
Tor သည် Firefox ကို အခြေခံ၍ ဤ browser ကိုအမြင့်ဆုံးနီးပါးကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြော်ငြာများလွန်းသောကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံသော element များရှိပါက browser သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်တော်တို့ကို configuration ၏အချို့သောရှုထောင့်များကိုရပ်တန့်စေလိမ့်မည်။ Mac အတွက်ဤ browser သည် trolls များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်သူတို့ကြည့်ရှုသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖန်တီးလိုသူများနှင့် IP မှတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ခံထားရသောအသုံးပြုသူများ။
Tor ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါထင်သူကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်၏ Opera သည်လက်ရှိအချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပါ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ယခင်နှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်နိမ့်ကျသောအခကြေးငွေဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Configuration options များမရှိခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရေနံစိမ်းများအပြင်အများပြည်သူကိုလည်း၎င်းကိုရပ်တန့်စေသည်။
Opera သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ navigation နှင့် customize လုပ်ရန် extensions များကို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်သူတို့အလွန်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ လျော့နည်းအစွမ်းထက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် A ကောင်းဆုံး option ကို။
အော်ပရာကို download လုပ်ရန်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါပြီ။
အခြား browser တစ်ခုကိုသင်စမ်းချင်လျှင် Maxthon သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသာမန်ထဲကဘာမှမကမ်းလှမ်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအခြားစက်များနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော၊ စကားဝှက်များကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ autofill fields များတိုးချဲ့ခြင်းပြallowsနာသည် Firefox နှင့် Chrome စတိုးအချို့ကိုသာ install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၊ Mac အတွက်ဤဘရောင်ဇာသည်ထင်ရှားပေါ်လွင်သည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် Chrome နှင့်မတူကွဲပြားသည့်အချိန်များ၌ Maxthon သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှလိုအပ်ချက်များစွာမလိုအပ်ပါ။
Maxthon ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည် Mac App Store မှတစ်ဆင့်
Maxthon Browser ကိုအခမဲ့
Chrome ကဲ့သို့ပင် Chromium-based browser ။ ဒါက ဗီဒီယိုနှင့်တေးဂီတသုံးစွဲမှုအတွက်ရှာဖွေနိုင်သော Mac အတွက်အကောင်းဆုံးဘရောက်ဇာအထူးသဖြင့်ဘရောက်ဇာမှတေးဂီတဖွင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါအထူးသဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ Chrome တွင်ကဲ့သို့အခြား extension များတပ်ဆင်ရန်မလိုပဲကျွန်ုပ်တို့ browser (ဘရောက်ဆာ) တွင်ဖွင့်ထားသောဗွီဒီယိုများကို download လုပ်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ download ချစ်သူများအတွက်စံပြ torrent manager ကိုလည်းပေါင်းစပ်ပေးသည်။ Chromium ကို အခြေခံ၍ Torch သည် Web Chrome Store တွင်ရရှိနိုင်သောတိုးချဲ့မှုအားလုံးကိုတပ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း extensions များအသုံးပြုခြင်းကိုတော်သင့်ရုံမျှသာပြုလုပ်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကမည်သည့် Mac ကိုမဆို၎င်း၏ browser ကိုမည်သည့် Mac ပေါ်တွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်းရန်ခက်ခဲသော mule အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Torch သတိပေးချက်များ အထူးသဖြင့် ၄ င်းထက်ပိုသော extension များပေါင်းထည့်သောအခါ. Touch Browser ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်.
အတု Mac အတွက် browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အလိုအလျောက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ Fake ကလူသားရဲ့ interface ကိုမလိုအပ်ဘဲ graphical workflows တွေကိုဖန်တီးဖို့ browser လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ ဖန်တီးထားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အခြားသုံးစွဲသူများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ အတုကို OS X မှ Automator မှလှုံ့ဆော်သည်။ Safari နှင့် Automator တို့သည်စုံလင်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအင်တာနက်နှင့်လျင်မြန်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာဆက်သွယ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။
အတုသည်အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ရှည်လျားသောပုံစံများကိုဖြည့်သည့်အခါတာဝန်များကိုအလိုအလျောက် နှင့်ပုံရိပ်ဖမ်းယူ။ Fake ၏အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်ဇာတိ Mac OS X AppleScript scripting tool ဖြင့်အလိုအလျောက် scripting များကိုအခြားသာမန် command line အလုပ်များသို့ပေါင်းထည့်သည်။
ဒီဘရောက်ဇာ, ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ဖြစ်ခြင်း, ဒေါ်လာ ၂၉.၉၅ ဖြင့်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် အခမဲ့ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးကြည့်ရှုစမ်းသပ်ရန်။
ရုရှားမှဆင်းသက်လာသော Yandex သည်ရုရှားရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Yandex ၏ browser ဖြစ်သည်။ Google သည်၎င်း၏ browser Chrome ကိုခေါ်ဆိုခြင်းကဲ့သို့နာမည်ပြောင်းရန်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိသေးပါ။ Yandex သည် Mac အတွက်အလျင်မြန်ဆုံး browser များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စျေးကွက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်၊ malware ပါ ၀ င်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆီကနေအကာအကွယ်ပေးတယ်၊ အများသုံး Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပြီးအသိပေးတယ်၊ ဒါမှငါတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဂရုစိုက်ပါ။
စိတ်ကြိုက်နှင့်စပ်လျဉ်း, Yandex သည် browser နောက်ခံကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည် ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်အတွက်၊ browser အနည်းငယ်ကသာလက်ရှိကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ Yandex သည် iOS နှင့် Android အတွက်လည်းရနိုင်သောကြောင့်အခြား browser များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ browser နှင့်အခြား devices များနှင့် login data များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုလည်းပေးထားသည်။
Yandex ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်.
Sleipnir Browser ၏ developer က၎င်းတို့သည်ဤဘရောင်ဇာကိုဖန်တီးခဲ့ကြောင်းပြောဆိုသည် သင်ပုံ၏ပုံနှင့်သဏ္likာန်တူသည် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဘရောက်ဇာ၊ ငါတို့မျက်လုံးမှမထွက်ဘဲမြင်နိုင်သောအရွယ်အစားရှိသောစာမျက်နှာများ၏သမ်းနေးများ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူလယ်ကွင်းများ၊ သင်ယခုအချိန်တွင်သင်လိုအပ်သောပွင့်လင်း tab ကိုရှာရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။
Sleipnir ကိုတတ်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Track Pad (သို့) Magic Mouse ရှိအမူအယာများမှတစ်ဆင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသည့်စာမျက်နှာကိုလှည့်လည်ရန်ပုံမှန်အပေါ်နှင့်အောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ သူ့မှာ Navigation ကိုမြန်စေဖို့ keyboard shortcuts တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ဖို့တောင်မလိုပါဘူး။ ဤဘရောက်ဇာကမတူညီသော tab ၁၀၀ အထိဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ဖွင့်လိုက်သော tabs များသည်စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာလျော့ကျသွားလျှင်။
"Vivaldi" သည် Mac ၏လတ်တလော browser များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Vivaldi Technologies ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ၎င်းကို Opera ကိုတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည့် browser) ကတီထွင်ခဲ့သည်။ ) Jon Stephenson ကဗွန် Tetzchner ။
၎င်းသည် Opera မှ Presto မှ Blink သို့ပြောင်းလဲမှုကိုတုန့်ပြန်သည့်အခါ“ reactionary” ထိသော freeware browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်မှာ“ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများအတွက် browser” ဖြစ်သည်။
"Vivaldi" သည် Mac အတွက်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုနာရီပေါင်းများစွာလှည့်လည်ကြည့်ရှုသောသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်"အမှန်တရားကဒါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် tabs များရဲ့တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ အပေါ်၊ အောက်၊ ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် လိပ်စာဘားတည်နေရာ။ ထို့အပြင်သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် အမူအရာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ ကြွက်နှင့်အတူ, အသွင်အပြင်, ကီးဘုတ်အတိုကောက်များ နှင့်အများကြီး
၎င်း၏ထူးခြားထင်ရှားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအနက်မှကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုထောက်ပြနိုင်သည် အင်အားအကြီးဆုံးသမိုင်းကြောင်းအညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည် အလွန်မြင့်မားသောအမြင်အာရုံဖြင့်တင်ပြထားသောအသုံးပြုမှုစာရင်းအင်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနှင့်အချိတ်အဆက်များရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်လည်းအသုံးဝင်သည် မှတ်စုများ သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးစာသားကို paste လုပ်နိုင်တဲ့ link တစ်ခုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုပင်အစွမ်းထက်သည် bookmark မန်နေဂျာ မည်သည့်ပမာဏ၊ function ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် "tabs ၏ပုံများ"စသည်တို့
Vivaldi အတွက် Mac အတွက်အခမဲ့အခမဲ့သင်ကူးယူနိုင်ပါသည် ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ.
Rockmelt, လူမှုမီဒီယာ browser ကို
RockMelt သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှအထူးသဖြင့် FaceBook တွင်အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Mac အတွက်ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Google ၏ Chrome ဘရောက်ဇာကို အခြေခံ၍ RockMelt သည်အားသာချက်ရှိသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါင်းစည်းမှု သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီပိတ်ရန်အထူးထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအစပါဝင်သည် ချက်တင်ဘားလူမှုကွန်ယက်များထည့်သွင်းခြင်း၊ သင်၏အဆင့်အတန်းကို၎င်း၏ Spatial ထိန်းချုပ်မှုများမှတိုက်ရိုက်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အခြားအရာများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူက Chrome ကိုအခြေခံထားတဲ့ browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါဝါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးပါ ၀ င်ပါတယ်။
RockMelt for Mac ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
"Flock" သည် Apple ၏ Mac အပါအဝင်ပလက်ဖောင်းများစွာအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော web browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်အနေဖြင့် Gecko ကိုအသုံးပြုသည်၊ Mozilla Firefox နှင့်ဆင်တူသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Facebook, Twitter, Flickr သို့မဟုတ် YouTube ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အစွမ်းထက်သောပေါင်းစည်းမှု။ ဤနည်းအားဖြင့် Flock အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုချက်ချင်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဘေးမှာသိုးအုပ်၎င်းကိုဤဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏အဓိကမဏ္asိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများသည် RSS feeds နှင့်အကြိုက်ဆုံးများကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် Flock မှာလည်းအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။
WordPress, Livejournal သို့မဟုတ် Blogger တွင်သင်ထိုအချိန်ကအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိသော်လည်းဘလော့ဂ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်များကိုရေးသားနိုင်ခြင်း။
အားကြီးသော ကွမ်းခြံကုန်းနောက်မှအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်လျော်သောစာသားများ၊ လင့်များ၊ ရုပ်ပုံများကိုသင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အွန်လိုင်းတွင်။
ပါဝါ option ကို ဝေစုဓါတ်ပုံ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (သို့) Flickr တို့တွင် browser မှထွက်ခွာစရာမလိုပါ။
Flock web browser ကိုသင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဒီနေရာမှာ Apple ကို Mac ကွန်ပြူတာများတွင်စံသတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် Web ကိုကြည့်ရှုသောအခါ Firefox, Chrome သို့မဟုတ် Opera ကဲ့သို့ကျော်ကြားပြီးလူကြိုက်များသည်၊ လူသိနည်းမှုနည်းပါးသော်လည်းအနည်းငယ်မျှသာဒီဇိုင်းရှိပြီးအလိုလိုသိသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်။ Vivaldi သို့မဟုတ် Tor ကဲ့သို့စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ အခုသင်ရွေးမည်၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၌မျိုးစုံရှိခဲ့သော်လည်းဘရောက်ဇာများစွာသည်မွမ်းမံခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည် လမ်းအခြားသူများကြိုက်တယ် ကျောက်တုံး Yahoo မှဝယ်ယူခဲ့သည် သိုးစုကို ၎င်းသည်၎င်း၏မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မသိသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ Mac အတွက်ဘရောင်ဇာနှင့်အတူပြန်သွားမည်လား။ နေထွက် Browser တိုက်ရိုက်တည်ရှိခြင်းမှရပ်စဲခြင်းနှင့်လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိပါ။
ဒီစာရင်းထဲမှာမင်းထပ်ထည့်မလား။ မင်းအတွက်ဘာလဲ Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » Mac အတွက် Browser
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ် MacBook Air တွင် browser များစွာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအများဆုံးဖမ်းယူခဲ့သည့်တစ်ခုမှာ Crome သည်၎င်း၏ဘာသာပြန်ဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်မကြာမီတွင် Crome တွင်အများအားဖြင့်မရှိသောအမူအယာများကြောင့် Safari သို့ပြန်ခဲ့ရသည်။
လုံးဝသဘောတူတယ်။ Chrome ဟာနည်းလမ်းများစွာနဲ့သာလွန်ကောင်းမွန်ပေမယ့် Safari ရဲ့ built-in multi-touch အမူအကျင့်များသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ နောက်ပြန်သွားဖို့ trackpad ပေါ်မှာလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းပြေးရတာနှစ်သက်တယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်း feature သည်ရရှိနိုင်ပြီး Mac ပေါ်တွင် Safari ကိုကျော်တက်သည်။ အဆိုပါလိပ်ယုန်မှီခဲ့သည်။
Mac နှင့် PC များတွင်အီးမေးလ်အတွက် Firefox နှင့် Thunderbird ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါသည်။ Safari ကိုအသုံးပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာမှာ iPad နှင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းများ ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံရေး၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဘာမှမယုံကြည်ပါ၊ သို့သော် Chrome နှင့် Big Brother Google နှင့် ၄ င်းအချက်အလက်များကိုသင်မသိဘဲနှင့်ပိုမိုရယူရန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမ
Chafic BG (@chaficbaw) ဟုသူကပြောသည်
တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ သို့သော် trackpad နှင့်အတူ "အမူအယာများ" ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး browsing အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Chafic BG (@chaficbaw) ကိုအကြောင်းပြန်ပါ။
ရုရှား Sputnik browser ကို Mac တွင်တပ်ဆင်နိုင်သလား။
မင်္ဂလာပါ Chrome သည်ကျွန်ုပ်၏ Mac အတွက်အသစ်ပြန်လည်မွမ်းမံတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဝင်လို့မရသောစာမျက်နှာများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ operating system သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - OS X 10.8.5 ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား၎င်းကို update လုပ်ရန်သို့မဟုတ် Firefox ကို install လုပ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ Safari သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်မလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ! 🙁
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး၊ မင်းတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာလား နှုတ်ဆက်ခြင်း
Mac နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ meta search engine ရှိလားသိလား။
Firefox Quantum (ဗားရှင်း ၅၇) သည်ထာဝရဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ် Mac တွင်စာမျက်နှာများကိုအရင်ကထက်မဖွင့်နိုင်တော့ပါ၊ Safari ရှိပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Anne Swan အားပြန်ပြောပါ
ငါစာရင်းအနည်းငယ်ကိုမသိခဲ့ပါ၊ Safari ကိုယခင်ကကဲ့သို့မကြိုက်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုစမ်းကြည့်ရပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုချင်လျှင်ဤအကြောင်းကိုပြောရန်အလွန်အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးများပါသောအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ http://www.descargarotrosnavegadores.com
LTE ပါသော Apple Watch ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ